“Isku taga, Abuurta Shirkado Maalgashi oo joojiya dhulka aad iibsataan” Wasiirka Maalgashiga Somaliland |
“Isku taga, Abuurta Shirkado Maalgashi oo joojiya dhulka aad iibsataan” Wasiirka Maalgashiga Somaliland
Waxa magaalada Bristol booqasho ku yimi Wasiirka Maalgashiga Somaliland Mudane Maxamed Axamed Maxamuud (Cawad) oo booqasho shaqo ku yimi wadanka UK, gaar ahaan magaalada London oo uu kalano la lahaa shirkado maalgashi ka raba Somaliland.
Xafladan oo ay soo qaban qaabiyeen dhalinyaro aad isku dubarida kana dhigay goob aad u qurux badan oo ay ugu horeeyaan Guddoomiyaha Ururka Dhalinyarada Bristol (Bristol Horn Youth Concern) Mr. Khalil Cabdi Aadan, Siciid Maxamed Cali, Maxamed Cali Xaydar, C/xakiin Qotaale iyo Ruqiya Cabdi Xudhuun.
Xaflada ugu horeyn waxa wasiirka wasiirka ku soo dhoweeyey magaalada Bristol, odayaasha iyo dhalinyarada magaalada, waxaana xafladan oo u muuqatay in ay aad ugu badnaayeen dhalinyaradu ka soo qayb galkeeda iyada oo ku beegnayd wakhti waliba ay badankoodu shaqaynayeen hadana waxa ay wakhti siiyeen si ay u soo dhoweeyaan Wasiirka Maalgashiga kalana sheekaystaan waxyaabo badan oo u baahan in maalgashado.
Ugu horeyn waxa hadalka soo dhoweynta ah isaga daba maray Odayaasha Magaalada Bristol oo ugu horeeyo Oday Cumar Siyaad, Xasan Cali Wayd, Suldaan Mahdi iyo Oday Khaliif oo dhammaantoodaba si diiran ugu soo dhoweeyey madashii iyo magaalada Bristolba.
Safarka Wasiirka waxa iyaduna wehelisay Safiirka Somaliland u fadhiya London Marwo Ayaan Cashuur oo iyaduna xaflada si weyn uga hadashay kuna dhiiri gelisay dhammaan qurbo jooga Somaliland in ay ku dedelaan sidii ay ula xidhiidhi lahaayeen Xildhibaanada Baarlamaanka ee ugu jira meelaha ay degan yihiin uguna dhaadhicin lahaayeen qadiyada Somaliland.
Waxa kale oo ay xustay in bishan December ee soo socota ay qaban qaabisay shir weyn oo dhammaan dadka Somaliland ee ku dhaqan wadanka UK iyo shirkadaha shisheeye ee danaynaya maalgashiga Somaliland u qaban doonto shir weyn ayna ku dhiiri gelisay dadkii madasha ka soo qayb galay inay ku talagalaan shirkaas oo uu goob joog ka noqon doono C/raxmaan Saylici Madaxweyne ku xigeenka Somaliland.
Ugu danbayn waxa hadalka qaatay Wasiirka Maalgashiga Somaliland Mudane Cawad oo aad ugu dheeraaday sharaxaadna ka bixiyey halkii uu ka soo bilaabay shaqada qaranka Somaliland Wasaradda Maaliyada ilaa Wasiirka Maalgashiga ee uu hadda yahay.
Wuxuu kale oo xusay inuu u yimi wadanka UK oo kulano la lahaa shirkado doonaya inay maalgashadaan Somaliland, si wanaagsana isku afgarteen, wuxuuna sidoo kale aad ugu mahadnaqay sida diiran ee loogu soo dhoweyeeyey Magaalada Bristol oo ay joogaan dhalinyaro badan, wuxuuna ku dhiiri geliyey in xataa qurbo joogo Somaliland ay ka mid noqdaan shirkadaha maalgashada wadanka oo ay iska daayaan dhulka yar ee ay iibsanayaan, noqdaana kuwa is aamina, shirkado yayar samaysta oo wadankana shaqo abuur ka samayn kara, iyagana maalgashi iyo faa’iidobada ay ka heli karaan mustaqbalka, hadalkaas oo dadkii madashaqa ka soo qayb galay ay aad ula dhaceen.
Wasiirku waxa kale oo uu ogolaaday in si furan cidii su’aalo haysaa weydiiso, halkaas oo su’aalo badan lagu waydiiyey wasiirka, isaguna uu mid mid uga jawaabay.
Labadii toddobaad ee u danbeeyey waxa magaalada Bristol soo booqday laba wasiir oo ka mid ah xukuumadda Somaliland, wasiirka Qorshaynta iyo wasiirka maalgashiga. Waxa sidoo kale wadanka UK ku sugan, Wasiirka Cadaalada, wasiirka Golayasha Qaranka, Guddoomiyaha Baanka Dhexe iyo Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka, waxa sidoo kale la filayaa dhawaan isaguna inuu yimaado Guddoomiyaha Maxkamadaha sare ee Yuusuf X. Cali.